Iindlela ezili-14 zokuGxila kwiiMikhankaso yokuThengisa ngeDijithali | Martech Zone
Ukuqala kwam ukuphonononga le infographic, bendinokuthandabuza ukuba zininzi kakhulu iimethrikhi ezingekhoyo… kodwa umbhali wayecacile ukuba bajolise imikhankaso yentengiso yedijithali kwaye hayi isicwangciso sisonke. Kukho ezinye iimetrikhi esizijongayo xa zizonke, njengenani lamagama aphambili asezingeni kunye nenqanaba eliphakathi, izabelo zentlalo kunye nokwabelana ngelizwi… kodwa iphulo ngesiqhelo linesiqalo kwaye limise ukuze kungabikho yonke i-metric esebenzayo kwiphulo elichaziweyo.
le infographic evela kwiNtengiso yeDijithali kwiiPhilippines Uluhlu lwe iimetrikhi eziphambili Ukugxila xa kuphononongwa a umkhankaso wentengiso yedijithali.
Ukugcwala kwendawo yonke, imithombo yezithuthi, ukugcwala ngeselula, inqanaba lokucofa (CTR), ukucofa iindleko (CPC), ukuguqulwa kwemetriki, inqanaba lokuguqula (i-CVR), iindleko zokhokelo ngalunye (i-CPL), izinga lokuhlawula, ukujonga iphepha undwendwelo, ixabiso eliphakathi kumbono wephepha, ixesha eliqhelekileyo kwindawo, umndilili weendwendwe ezibuyayo, ukubuyela kutyalo-mali (i-ROI), kunye neendleko zokufumana abathengi (CAC) zonke zidwelisiwe njengezona zibalulekileyo.
tags: I-avareji yeendleko kwiphepha ngalinyeukujonga iphepha eliphakathi kutyelelo ngalunyeixesha eliqhelekileyo kwisizaizinga lokuhlawulabdrizinga lokucofaIinguqulelo zokuguqulainqanaba lotshintshoIindleko ngokucofa nganyeiindleko nganye ekhokelayoiindleko zokufumana umthengicpcplcctriindleko zokufumana abathengicvrkweso sithuthiUkugcwala kwendawo yonkeizinga leendwendwe ezibuyayoukubuya kutyalo-mali (ROI)imithombo yezithuthi